[ October 22, 2019 ] Madaxa Xukuumada Galmudug Sheekh Shakir Oo Magacaabay Guddiga Dorashada Galmudug	Wararka
[ October 22, 2019 ] Ciidamada Dowlada Oo Shacab Ku Xasuuqay Duleedka Muqdisho	Wararka
[ October 21, 2019 ] Askari Dilay Qof Shacab ah Iyo Banaanbaxyo Ka Dhacay Magaalada Garawe Puntland	Wararka
[ October 21, 2019 ] Meydka Taliyihii Ururka Gorgor ee Ciidanka Kumaandooska oo aan weli la aasin iyo Khilaaf ka taagan	Wararka
[ October 21, 2019 ] Madaxweyne Farmaajo Oo u Dhoofay Dalka Ruushka	Wararka
Ciidamada Boliska Muqdisho Oo Xalay Howlgalo Ciidan Ka Sameeyay Degmada Shibis
April 30, 2019 M.Jo 0
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa xalay waxaa ay howlgallo culus ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Shibis ee Gobolkan Banaadir, howlgalkaas oo lagu soo qab qabtay dad u badan dhalinyaro. Ciidamada ayaa baaritaano ku sameynaya Gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka Shaqeeya degmada Shibis iyo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir,waxaana sidoo kale howlgalkooda uu ahaa mid guri guri lagu baarayey. Dad u badan dhalinyaro ayaa howlgalkaas lagu qabtay,waxaana Goobjoogayaal ay sheegeen in Goob la isugu geeyey dadka,isla markaana badankood la sii daayey halka qaarkood ay Ciidamada weli baritaano ku hayaan. Wararka qaar aan heleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in dadka howlgalka lagu qabtay la geeyay Xarunta Hay’adda Dambi- baarista ee CID-da si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo. Waa habeenkii Saddexaad oo xiriir ah oo Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ay howlgalka ka sameeyaan degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir,waxaana la sheegay in uu daba socdo howlgallo si joogto ah looga sameeyo degmooyin ka tirsan gobolkan Banaadir.
April 29, 2019 M.Jo 0
Abaaha dhalay ninka lagu eedeeyay in uu maleegay weerarradii bambooyibka loo adeegsaday ee Axaddii ka dhacay Sri Lanka Zahran Hashim ayay laamaha ammaanku dileen Jimcihii, sida uu booliisku sheegay. Zahran Hashim oo isku qarxiyay hoteel ku yaalla Colombo ayaa aasaasay koox lagu magacaabi NTJ oo hadda la mamnuucay. Booliiska ayaa hawgal ka fuliyay xaruntii ugu waynayd ee kooxdaas oo ku taalla magaalada Kattankudy oo ku taalla dhanka bari ee dalkaas. Madaxweynaha Sri Lankan ayaa ku dhawaaqay in la mamnuucay in wajiga la qarsado arrintaas oo loola jeedo indho shareerka dumarka Muslimka ah, arrintaas ayaana dabo socota weerarrada dhacay. Weerarka ayaa lagu bartilmaameedsaday Kiniisado iyo hotteeello waxaana lagu dilay ugu yaraan 250 ruux. Axaddii waxaa la baajiyay in kiniisadaha Siri Lanka cibaado loo aado, balse dadka caasimadda ku nool ayaa isku arruursaday bannaanka kiniisadda St Anthony oo aad ugu burburtay weerarka. Siday ku dhinteen qaraabada Hashim? Laamaha ammaanka ayaa hawlgal ka fuliyay meel u dhaw Kattankudy oo ah meesha uu ka soo jeedo Hashim maalintii Jimcaha. Qof hubaysan ayaa rasaas ku furay ciidammada oo ku sii [Sii aqri]
Madaxweyne Cabdulahi Dani “Waxaan Iclaaminay Shirka Dowlada Dhexe Iyo Maamulada Dalka”
April 28, 2019 M.Jo 0
Madaweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullahi Dani oo shalay galinkii danbe dib ugu laabtay Puntland ayaa Xalay shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe. Madaxweyne Dani oo Todobaadyo ku maqnaa dalka dibadiisa ayaa isu maray wadamada Imaaraadka Carabta iyo Kenya, waxa uu sheegay in magaalada abuu Dubia uu hishiisyo hormarineed kula soo gaaray Madaxda Imaaraadka iyo Shirkado ganacsi. Dhanka kale Magaalada Nairoobi ee dalka Kenya ayuu sheegay in uu kula kulmay madaxda Maamulada Jubbaland iyo Galmudug kuwaasi oo ay ka wada hadleen xaaladaha cakiran ee uu dalku marayo. Sidoo kale waxa uu sheegay in Nairobi uu kala kulmay qaar kamid ah wakiilada Beesha Calamka ujooga soomaaliya iyo siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed, kuwaas oo ay ka wada hadleen xaaladaha guud ee dalka. Madaxweynaha Siciid Deni qudbadiisii xalay uu ka jeediyay magaalada Garoowe waxa uu Dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyey in aysan iyadu ogoleyn nidaamka Federaalka oo ay kasoo horjeeddo. Qudbadiisa oo dhinacyo badan taabaneysay ayuu kusoo hadal qaaday hanaankii loo maray magacaabistii Guddomiyaha Bangiga dhexe Soomaaliya iyo Guddomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka, oo uu ku dhaliilay qaabka magacaabistooda, [Sii aqri]
Maxay Kawada Hadleen Laamaha Ammaanka iyo Maamulka Gobolka Banaadir ?
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa sheegay in maamulka iyo shacabka Gobolka ay ka go’an tahay sidii ay qeybtooda uga qaadan lahaayeen qorshe-yaasha lagu dar-dar gelinayo amniga Caasimadda. Eng. Yarisow oo guddoominayey kulan ay ka wada qeyb galeen Wasiirka Amniga Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale, Taliyeyaasha Ciidanka Ammaanka, Guddoomiye ku xigeennada Gobolka, khubaro ka socotay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay muhiimadda ay u leedahay wada shaqeynta dhinacyada kala duwan ee ammaanka iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la dardargeliyo istiraatiijiyadda amniga iyo dariseynta, si looga hortago falalka amnidarro oo ay ugeysanayaan Al-Shabaab. Guddoomiyaha Gobolka ayaa si gaar ah ugula dar-daarmay hay’adaha amniga in ay adkeeyaan wada shaqeynta dhanka amniga ee ay la leeyihiin bulshada degmooyinka, taas oo muhiim u ah qorsheyaasha xasilinta Caasimadda. “Waxaa xaqiiq ah in weli ay jiraan caqabado dhinaca ammaanka ah iyo guulo wax ku ool ah oo la gaaray muddooyinkii la soo dhaafay, kuwaas oo aan la yareysan karin, balse haddii aan sii xoojinno dadaalkeenna iyo wada shaqeynta aan la leenahay bulshada degmooyinka ay hubaal [Sii aqri]
Guddiga Amniga Jubbaland Oo Amaro Adag Soo Saaray
April 22, 2019 M.Jo 0
Waxaa Magalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose kulan ku yeshay Guddiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay kaga hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen adkeynta amniga, xoojinta dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo diyaar garoowga Bisha barakeysan ee Ramadaan. Guddiga Amniga ayaa waxaa ay soo saareen amaro la xiriira Gawaarida aan sharciga laheyn,sida sharciga lahaanshaha, taarikada warqada wada marsiinta iyo qodobo Kale. Afhayeenka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdi Nuur Ibraahim Xuseen ayaa warbaahinta u sharaxay amarada kasoo abxay guddiga amniga dowlad Goboleedka Jubbaland, isaga oo digniin u diray darawalada Gaadiidleyda ka howlgalla Magalada Kismaaayo. Sidoo kale gudiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyey in inta lagu guda jiro Bisha barakeysan ee Ramadaan ee maalmo qura inaga xigaan la adkeyn doono amniga magaalooyinka waaweyn ee dowlad Goboleedka Jubbaland.
Lamaane xabsi daa’im loogu xukumay ‘tacaddiyo’ ay carruurtooda u gaysteen
April 21, 2019 M.Jo 0
Lamaane ku nool gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa xabsi daa’im loogu xukumay inay gaajo iyo jirdil u gaysteen 12 ka mid ah 13 carruur ah oo ay dhaleen. David iyo Louise Turpin ayaa la xiray Janaayo 2018 xilligaas oo gabadhooda 17-jirka ah ay ka baxsatay gurigooda oo ku yaal magaalada Perris markaas oo ay booliska wargalisay. Carruurta ayaa waxaa tacaddiyo loo gaysanayay ugu yaraan sagaal sanadood oo qaarkood waxaaba la helay iyagoo jeebaysan kuna nool xaalad aad u liidata. Hasayeeshee dhowr carruur ah ayaa u maxkamadda u sheegay inay waalidiintood cafiyeen. Lamaanahan ayaa la filayaa in inta ka dhiman noloshooda ay ku dhameysan doonaan xabsiga, haddii aanan lagu cafin muddo 25 sanadood gudahood ah. Lamaanaha Turpins ayaa ilmeeyay markii ay afar carruur ah oo ah dhaleen ka maqleen saameynta bayaankooda mar Jimcihii la dhageysanayay dacwadda. Canug yar ayaa ka sheekeeyay dhibaatada ku habsatay. Kalmado kuma qeexi karno wixii aynu soo marnay intii aannu soo koraynay,” ayuu ku sheegay bayaankiisa. “Mararka qaar waxaan ku qarwaa waxyaabihii nagu dhacay sida in la katiinadeeyay walaalahay oo la [Sii aqri]
Maxay Kawada Hadleen Wasiir Goodax Iyo Xubnaha Aqalka Sare?
Xubno ka tirsan aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo farageliyey khilaafka xillkigaan u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya iyo Dowlad goboleedka Puntland, kadib markii Puntland ay diiday sanadkaan ka qeyb galka Imtixaanka ay qaadeyso Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya. Xubno ka socda Sanoterada Aqalka Sare ayaa kulan gaar ah waxa ay la qaateen Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi goodax Barre, iyaga oo kala hadlay imtixaanka Dowliga ah ee Dugsiyada sare iyo sidii loo mideyn lahaa, sidoo kalena xal looga gaari lahaa khilaafka. Sanatarro laga soo dortay Puntland oo kulanka ka qeyb galay ayaa sheegay inay u baxayaan Puntland si la iskula meel dhigo arrinta imtixaanka mideysan. Wasiirka Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare ee dalka Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa dhankiisa waxa uu xusay in Puntland ay waaya aragnimo u leedahay arrimaha waxbarashada,sidoo kalena uu rajeynayo in Xubnaha Aqalka Sare ay keeni doonaan isku-soo dhawansho Wasaaradda Waxbarashada iyo Maamulka Puntland. Khilaafka u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo Maamulka Puntland ayaa soo ifbaxay todobaad ka hor, kadib markii Wasiir Cabdullaahi goodax Barre uu sheegay in Puntland [Sii aqri]
April 19, 2019 M.Jo 0
Maanta oo Jimco ah kuna beegan 19/4/2019 ayaa qorshuhu ahaa in uu Magalada Muqdisho ka furmo shir u dhaxeeya Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa Dowlad goboleedyada, hayeeshee shirkaasi uu baaqday. Sababaha ugu weyn ee shirkaais u baaqday ayaa waxaa ka mid ah in ay diideen qaar ka mid ah Madaxda Maamul goboleedyada, sigaar ah Maamulada puntland iyo Galmudug,waxaana maamulada qaar ay shirkaasi ku xireen shuruud adag. Madaxweynayaasha Maamulada Galmudug iyo Jubbaland ayaa haatan ku sugan Magalda Nairobi ee dalka Kenya,waxaana ku biiri doona Madaxweynaha Maamulka Puntland,iyaga oo halkaasi shir kula qaadan doona Madax ka socota Beesha Caalamka. Ma ahan markii ugu horeysay oo Madaxda Maamul goboleedyada ay kasoo horjeestaan shir uu iclaamiyey Madaxweyne Farmaajo,hadaba maxaa keenay arrintaas waxaa ka hadlaya Siyaasi Maxamed Cumar Geedi oo mar ka mid ahaa Baarlamaankii Sagaalaad.
Wasiirka Wasaaradda waxbarashadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa Cambaareyn kala kulmay Hadal uu shalay ugu hanjabay Waalidiinta iyo Ardeyda kunool degaanada maamulka Puntland. Wasiir Goodax ayaa sheegay shalay in aysan heli doonin Shihaadada ay bixiso dowladda Ardayda degaanada maamulka Puntland hadii aysan ka qeyb galin Imtixaanka Guud ee dowlada Soomaaliya ay iclaamisay. Madaxda Puntland ayaa Cambaareeyay Wasiirka waxaana ay sheegeen in uu u hanjabay Ardaydii iyo waalidiintii uu u ahaa Wasiirka waxbarashadda Soomaaliya. Puntland ayaa sheegtay in 10 kii sano ee ugu dambeeyay ay qaadeysay Imtixaan Mideysan, islamarkaana dowladda dhexe aysan waxba ka khuseyn hanaanka waxbarashadda dalka, maadaama dalka uu yahay Federaal. Wasiirka waxbarashadda Puntland ayaa ugu baaqay in xilka laga qaado Wasiir Goodax, Maadaama uusan u qalmin hoggaaminta bahda waxbarashadda Soomaaliya. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa raali galin ka dalbaday in uu bixiyo Wasiir Goodax.
General Koronto;”Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeelle ma matalaan shacabka Banaadir”
Taliyihii hore ee Qeybta 27-aad ee xoogga dalka Jeneral Maxamuud Maxamed Macalin “Koronto” ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho iyo hadal ay jeediyeen Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeele General Koronto ayaa waxa uu ku tilmaamay Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeelle kuwo aan matalin shacabka magaalada Muqdisho. Jen Koronto ayaa sheegay in Siyaasiyiinta u hadlay dowladda aanay aheyn dad matala dadka Banaadir ee ay yihiin kuwo horay u kala qeybiyay dadka oo taariikhdooda la haayo. “Cali Maxamed Geedi iyo Salaad Cali Jeelle waa nimanka kala qeybiyay dadka Banaadir oo horay uga soo fashilmay dalka inay maanta dowladda u hadlaan waa nasiib darro, dadkaas Banaadir kuma qancaan inay ku hadlaan oo ay ku soo horkacaan, waxay abuureysa waxyaabo horay loo iloobay in la soo xusuusto, Madaxweynaha waxaa loo qaadanayaa inuu raalli ka yahay, nimankaas Ma Matelaan o dadka Banaadir waa dad taariikhdooda qoran tahay oo dhibaatooyin u geystay dadkaan”ayuu yiri general Koronto. “Waxa uu ku dhashay Madaxweyne Farmaajo magaalada Muqdisho,waxaa lagu dhex doortay Muqdisho waa Madaxweynihii ugu nasiib badnaa waana [Sii aqri]